ICT for Myanmar: How to hack Android phone to move all Android apps to SD card?
How to hack Android phone to move all Android apps to SD card?
Android ဖုန်းတွေဟာ internal phone memory ပေါ်မှာပဲ application တွေကို install လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီတော့ internal phone memory ပြည့်လာတာနဲ့ အသုံးပြုသူမှာ ပြဿနာ (၂) ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။
၁) နောက်ထပ် application များ ထပ်မံ install လုပ်၍မရတော့ခြင်း။
၂) ဖုန်း က လိပ်ထက်တောင် နှေးကွေးလေးလံ သွားခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်း ရဲ့ လုပ်ဆောင်နှုန်းတွေ နှေးကွေးသွားရခြင်းကတော့ internal phone flash memory ကို အချက်အလက်တွေ သွားရေးရတဲ့ speed က free memory နည်းလာလေလေ နှေးလာလေလေ မို့လို့ပါ။
အဓိက က တော့ဗျာ internal memory ကို free space များများ ထားသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီတော့... ကိုယ်သုံးတဲ့ ဖုန်းရဲ့ internal memory သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ? ကိုယ်သိပ်မသုံးတဲ့ application ကို uninstall လုပ်တာကတော့ အလွယ်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်းပေါ့ဗျာ။
ခုတော့ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး... apps2sd ဆိုတဲ့ Application တွေကို SD Memory Card ပေါ်ကို ရွှေ့တဲ့ feature တခု ပေါ်လာပါပြီ။ ဒီလိုရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက် application
တခုတော့ရှိတာပေါ့... Application တွေ အားလုံးကိုတော့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ ကန့်သတ်ချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရသလောက် ရွှေ့ကြည့်တာပေါ့။
- Application တွေကို SD Memory card သို့ရွှေ့တဲ့အခါမှာ Application ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကတော့ internal phone memory မှာ ကျန်နေပါမယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ internal phone memory ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ Application အစိတ်အပိုင်းတချို့ က memory space အနည်းငယ်တော့ ယူထားပါအုံးမယ်။
ဥပမာ... Google Earth ဆိုရင် 20.5MB ကနေ 15 MB လောက်ထိ ကို internal phone memory ထဲကနေ လျော့သွားစေတာမျိုးပါ။ ဒီတော့ internal phone memory ထဲမှာ 5.5 MB လောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
- Application တခုကနေ Home screen ပေါ်မှာ ယူသုံးထားတဲ့ Widget မျိုးကို SD Memroy card ကို မရွှေ့သင့်ပါဘူး။ Widget အလုပ်မလုပ်တော့တာမျိုးဖြစ်တာကနေ ရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပါ။
- Android OS တွေမှာ Application အားလုံးကို SD Memory Card ကို တကြိမ်တည်းနဲ့ ရွှေ့ပေးနိုင်တဲ့ batch tool မျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် application တခုကို တကြိမ် ရွှေ့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
- Maps နဲ့ Youtube လိုမျိုး system application တွေကိုလည်း SD Memory Card ထဲကိုရွှေ့လို့မရပါဘူး။ တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Adobe Flash Player ကို system application အနေနဲ့ pre-installed လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကိုလည်း ရွှေ့လို့မရပါဘူး။
- တကယ်လို့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ firmware ကို re-flash လုပ်ခဲ့ရင်လည်း တချို့ SD Mermory Card ထဲကို ရွှေ့ထားပြီးသား application တွေကို internal phone memory မှာ ပြန် install လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့မှ SD Memory Card ထဲကို ပြန်ရွှေ့ရပါမယ်။
ကဲ...ဒီလောက်ဆို SD Memory Card ကို Application တွေ စတင်ရွှေ့ကြည့်ကြရအောင်။
- ပထမဆုံးအနေနဲ့ Android Debug Bridge ဆိုတာလေးကို လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုဖို့ရန် အတွက် root လုပ်ထားပြီးသား phone ဖြစ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
- ဒီတော့ Android Debug Bridge ပါဝင်ပြီးသား Android SDK ကို ဒီနေရာမှာ သွားယူပါ။ (http://developer.android.com/sdk/index.html)
- Android SDK ရပြီဆိုရင် unzip လုပ်ပြီး ကိုယ့် PC မှာ install လုပ်ပါ။ unzip လုပ်လို့ရလာတဲ့ Folder location path ကိုမှတ်ထားပြီး Folder နာမည်ကို sdk လို့နည်မည်ပေးတာပေါ့။Install လုပ်နည်းကို ဒီမှာသွားကြည့်ပါ။ (http://developer.android.com/sdk/installing.html)
- Windows မှာ install လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ USB driver ကို install လုပ်ထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဒီမှာ သွားယူပါ။ (http://developer.android.com/sdk/win-usb.html)
- ပြီးပြီဆိုရင် phone ကို USB cable သုံးပြီး PC နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ USB storage mode ကို enable မလုပ်ပါနဲ့။
- PC မှာ Command Prompt ကိုဖွင့်ပါ။
- Command Prompt ထဲမှာ Android SDK ကို unzip လုပ်ထားခဲ့တဲ့ sdk folder ဆီကို သွားပါ။ " cd full_path_to_sdk_tools " ဆိုတဲ့ command သုံးပြီးတော့ သွားတာပေါ့။
- အောက်က line နှစ်လိုင်း ကို Command Prompt ထဲမှာ တကြောင်းရိုက်ပြီးတိုင်း enter ခေါက်ပါ။
" adb shell "
" pm setInstallLocation 2"
- Phone မှာ Settings>Applications>Manage Applications>All လုပ်ပါ။
- Phone ရဲ့ Menu ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Sort by Size ကို ရွေးပေးပါ။
- Application ရဲ့ Size အနည်းဆုံးလေးတွေကနေ စ ပြီး တခုချင်းစီ SD Memory Card ကို ရွှေ့ပါ။ တခုရွှေ့လို့ပြီးပြီဆိုရင် Back ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး နောက် Application ကို ထပ်ရွှေ့ပါ။
- (တကယ်လို့ပေါ့ဗျာ နောက်ထပ် install လုပ်မယ့် application တွေရဲ့ default location ကို internal phone memory ထဲကိုပဲ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PC ရဲ့ Command Prompt ကိုသွားပြီး အောက်က command line လေးကို ရိုက်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
" pm setInstallLocation0")
- ကဲ... ပျော်ပျော်ကြီး လုပ်ကြည့်ပေတော့ဗျာ။
တခုပဲပြောချင်ပါတယ်... အခု အပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းဟာ Android 2.2 (aka Froyo) version အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့...အပေါ်က နည်းလမ်းတွေကို မလုပ်ခင်မှာ Backup လုပ်ထားဖို့ မှာချင်ပါတယ်။ ဒါမှ တခုခု လွဲချော်ခဲ့ရင် ပြန်ပြီး Restore လုပ်လို့ရမှာပါ။
How to hack Android phone to move all Android apps...
AppLocker and how to use it?
How do intruders get passwords?
URL doesn't exist ဆိုပါလား...ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ?...
How to clear DNS cache in Windows,Linux and Mac
Guide to Jailbreak iOS 4.2.1 with Greenpois0n RC 5...
Unicode...the way to go for the future !!!
Bandwidth and Hosting Plan